Sagantaa Kamisa Sadaasa 18, 2021 - Independent Oromia
Walloo: Haleellaan xiyyaaraan raawwatamu itti-fufe
Haleellaan humna xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaan, Hawaasa Oromoo Walloo hidhanno-maleessa irratti fuuleffachuun raawwatamu jabaatee itti-fufee jiraachuu.
Kanaanis, Ona Jiillee Dhummuuggaa keessatti kan argamtu Gandi Naannoytuu, Kamisa Sadaasa 18, 2021 har'aa, meeshaalee waraanaa gurguddaa halaalaa furguggifamanii fi boombii xiyyaara irraa gadi roobsamuun barbadeeffamaa ooluu; qabatamaattis, Oromoonni baay'inaan 14 ol ta'an lubbuun darbuu.
Duula Finxaaleyyii Amaaraa - Hawaasa Oromoo irratti
Duguuggaan sanyii Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Giddaa Kiiramuu keessatti, humnoota finxaaleyyii Amaaraan Uummata Oromoo irratti raawwatamu, kan baatii darbe irraa qabuun bifa haarayaan geggeeffamaa jiru, Kamisa har'aas itti-fufuun geggeeffamaa ooluu.
Duula guyyaa har'aa, Ona Kiiramuu Ganda Margaa Jireenyaa jedhamtu keessatti, hawaasa Oromoo irratti banameenis, Oromoonni sadii ajjeefamuu fi manneen jireenyaa sadii gubamuu.
Duula duguuggaa sanyii baatii darbe irraa qabuun hanga guyyaa har'aatti deemaa jiruunis, gandeen Ona Kiiramuu jala jiran keessaa qofa, Oromoonni baay'inaan Kuma-Shantamii-Lamaa olitti tilmaaman qe'ee ofii irraa buqqifamuu.
Oromoota kanneen keessaa muraasni gara firoottan isaanii onoota ollaatti argamanitti kan baqatan yommuu ta'u, irra-jireessi isaanii garuu yeroo ammaatti, manneen Barnootaa Magaalaa Kiiramuu keessatti argaman keessa qubachuun, gadadoo hamaa mudachaa jiraachuu.
Odeessa biroon, Loltoonni Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, kanneen Ona Mana Sibuu, Magaalaa Mandii keessa maandheffatanii turan, guyyoota dadan darban irraa qabuun, bakkas lakkisuudhaan bahaa jiraachuu.
Sagantaa Kamisa Sadaasa 18, 2021